समुद्रमा ज्यान गुमाउँदै नेपाली- समाचार - कान्तिपुर समाचार
सामुद्रिक जहाजमा सुरक्षा गार्ड रहेका दुई नेपालीको हिन्द महासागरमा मृत्यु
पुस ९, २०७८ जनकराज सापकोटा
काठमाडौँ — हिन्द महासागरअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक क्षेत्रमा माछा मार्ने डुंगामा कार्यरत दुई नेपालीको तीन दिनको अन्तरमा मृत्यु भएको खुलेको छ । सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत उनीहरूको असोजको पहिलो साता मृत्यु भएको हो ।
मृतकका एक परिवारले प्रहरीमा दिएको उजुरीका आधारमा घटना सार्वजनिक भएको हो । उजुरीका आधारमा उनीहरूलाई त्यहाँसम्म पुर्‍याउने कविराज कटुवाल पक्राउ परेका छन् ।
मृतकमध्येका एक भक्तपुर राधेराधेनजिकै पसल गरी बस्ने अवकाशप्राप्त नेपाली सैनिक ४६ वर्षीय उत्तरबहादुर कार्की हुन् । भक्तपुर थिमि–३ का कटुवाल पूर्वसैनिक र प्रहरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जल क्षेत्रमा माछा मार्ने र कार्गो गर्ने जहाजको सुरक्षा गार्डका रूपमा पठाउने काम गर्थे । उनले नै मलेसियन कम्पनीबाट श्रम स्वीकृति निकालेर कार्कीलाई काठमाडौंबाट उडाएका हुन् । मामा नाता लगाएर कटुवालले दुई लाख रुपैयाँ लिएका थिए । मृतक कार्कीका परिवारका सदस्यका अनुसार कटुवालले एकैचोटि करिब २५ जनाजति पूर्वसैनिक र प्रहरीलाई सामुद्रिक जहाजमा सुरक्षा गार्डको कामका लागि उडाएका थिए ।
महिनौंसम्म समुद्रमा नै रहनुपर्ने र जहाजबाहिर उभिएर सुरक्षा दिनुपर्ने जोखिमपूर्ण काम गर्दागर्दै कार्की बिरामी परे । भतिज कमल कार्कीका अनुसार सुरुमा उनको खुट्टा सुन्निएको थियो । तर कम्पनीले समयमै उपचारको पहल गरेन । समुद्रको चिसो र खानपान नमिलेका कारण मात्रै होइन, समयमै उपचार नपाउँदा उनको बिमार झन् बल्झिँदै गयो । बिमारले चाप्दै लगेपछि काका २ सातासम्म बेहोस जस्तै भएको कमलले बताए । सोही जहाजमा रहेका जितबहादुर नामका अर्का नेपालीले एजेन्ट कटुवाललाई बिरामीलाई उद्धार गर्न भन्दै खबर पठाएका थिए । तर उनले उद्धारको पहल गरेनन् । असोज २ मा हिन्द महासागरमा कार्कीको मृत्यु भयो ।
परिवारका सदस्यका अनुसार मृत्युपछि सामान्य मानवीय भावनासमेत नदेखाई डुंगा चालकहरूले शव जहाजमै राखेर कैयौं दिनसम्म माछा मार्ने काम गरिराखे । ८ दिनपछि बल्ल उनीहरूले शवलाई सोमालियाको सामुद्रिक तटमा ल्याइपुर्‍याए । त्यतिबेलासम्म उनको शव सडिसकेको थियो ।
प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार शव नेपाल ल्याउन भन्दै एजेन्ट कटुवालले परिवारसँग ४० लाख रकम मागेका थिए । तर शव ल्याउन सक्ने अवस्था नभएपछि उतै प्रक्रिया मिलाएर सद्गत गरियो । त्यसपछि पीडित परिवारले कटुवालविरुद्ध ब्युरोमा किटानी जाहेरी दिएका थिए । ब्युरो स्रोतका अनुसार नेपाली सेनाका भगौडा कटुवालले पूर्वसेना तथा प्रहरीलाई मलेसियन कम्पनीमार्फत सामुद्रिक जहाजमा सुरक्षा गार्डका रूपमा पठाउने गरेका थिए । कम्पनीले कामदारलाई दिने तलबबाट पनि हरेक महिना केही सय डलर कमिसन काटेर कटुवालले लिने गरेको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरीले बताए ।
कार्कीको मृत्युको केही दिनपछि असोज ५ मा हिन्द महासागरको सोही सामुद्रिक क्षेत्रको अर्को पानी जहाजमा सुरक्षामा खटिएका सोलखुम्बुका ३६ वर्षीय ओमबहादुर खत्रीको मृत्यु भयो । सोही जहाजमा काम गर्ने अर्का नेपाली बिरामी अवस्थामा नेपाल फर्केपछि मात्रै घटनाबारे जानकारी भएको हो । चितवन पर्साका मीनबहादुर गुरुङसहितका ११ जना गत फागुन ३ गते काठमाडौंबाट दुबई हुँदै दक्षिण अफ्रिकाको सानो टापु देश कोमोरोसको सामुद्रिक तटमा पुगेका थिए । सोही टोलीमा थिए, खत्री पनि ।
अदालतले सजाय तोकेका दलाललाई प्रहरीले छाड्दा
कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा गुरुङले आफू तीन लाख खर्चेर माछा मार्ने सामुद्रिक जहाजको सुरक्षा गार्डका रूपमा पुगेको बताए । उनलाई कार्गो जहाजको सुरक्षामा काम गर्ने भने पनि माछा मार्ने जहाजको सुरक्षा गर्न खटाइयो । उनका अनुसार स्थलमार्गबाट समुद्रमा जहाज हिँडेपछि महिनौंसम्म जमिन देख्न पाइँदैन । सामुद्रिक तस्करबाट जहाजको सुरक्षा गर्न र मारेका माछा जोगाउन उनीहरू हरदम डुंगाको बाहिरपट्टि हतियारसहित सतर्क बसिराख्नुपर्छ । उनीसँग उक्त जहाजमा खत्रीबाहेक चितवनकै पूर्णबहादुर तामाङ र सिन्धुपाल्चोकका रामहरि खत्री पनि थिए ।
जहाजमा काम गर्दागर्दै खुट्टा सुन्निनेलगायतका समस्या देखिएपछि खत्रीलाई उपचार गर्न जहाज सामुद्रिक तटीय क्षेत्रमा जाने तयारी गरिरहेको थियो । गुरुङले भने, ‘ओम मेरै काखमा थिए । उनलाई लिएर फर्किंदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भयो ।’ मृत्युको चार दिनपछिमात्रै उनको शवलाई सोमालियाको तटीय क्षेत्रमा ल्याइएको गुरुङले बताए । मानव बेचबिखन ब्युरोका अनुसार खत्रीका परिवारका सदस्यको सक्रियतामा शव नेपाल ल्याएर दाहसंस्कार गरिसकिएको छ । तर परिवारका सदस्यले कसैविरुद्ध किटानी जाहेरी भने दिएका छैनन् ।
आफूसँगै काम गर्ने सहकर्मीको मृत्युपछि गुरुङ पनि मानसिक रूपमा भयभीत बनेका थिए । उनले भने, ‘मेरो पनि खुट्टा सुन्निने र चिटचिट हुनेजस्तो समस्या देखा पर्न थालेको थियो ।’ बिरामी भएकाले छिटो उद्धार गर्न बारम्बार भनेकाले ६ दिनपछि उनको उद्धार प्रक्रिया सुरु गरियो । उनका अनुसार एक दिन लगातार ११ घण्टा, अर्को जहाजमा ९ घण्टा र त्यसपछि सानो जहाजमा आधा घण्टाको यात्रापछि मात्र उनले सोमालियाको सामुद्रिक तटीय क्षेत्रमा जमिन स्पर्श गर्न पाए । सोमालियाको राजधानी मोगादिसुको एक अस्पतालमा चार दिनसम्म उपचार गरेर १८ कात्तिकमा उनी कतार हुँदै नेपाल फर्किएका हुन् ।
उनका अनुसार अहिले पनि सामुद्रिक जहाजमा सयौं नेपाली सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत छन् । तीमध्ये केही उच्च सुरक्षा जोखिम क्षेत्रमा पनि छन् । कम्पनीले तीन महिनाका लागि भनेर काठमाडौंबाट उडाए पनि उनलाई बीचमै समय थपेर ६ महिना काममा लगाइएको थियो । ‘मासिक झन्डै ६० हजार रुपैयाँ थाप्न ज्यान नै जोखिममा परेको सम्झिँदा अहिले पनि तर्सिन्छु,’ उनले भने, ‘काखैमा सँगै काम गर्ने साथीको मृत्यु भएको घटना सम्झिन नपरोस् भनेर त्यहाँ छँदा खिचेका सबै फोटो डिलिट गरिदिएँ ।’
प्रकाशित : पुस ९, २०७८ ०८:५९
टर्कीबाट अवैध रुपमा छिर्न खोजेको कार ग्रिस प्रहरीले रोक्न खोजेपछि तीव्र गतिमा हुइँकिँदा पर्खालमा ठोक्किएको थियो
पुस ८, २०७८ जनकराज सापकोटा
काठमाडौँ — संगठित मानव तस्करको भर परेर अवैध रूपमा टर्कीबाट ग्रिस छिर्न खोज्दा भएको गाडी दुर्घटनामा मृत्यु भएका चार नेपालीको पहिचान खुलेको छ । ग्रिसको राजधानी एथेन्सबाट ५ सय २ किमि पूर्वमा गत कात्तिक २५ मा भएको दुर्घटनामा ७ जनाको ज्यान गएकामा चार जना नेपाली परेको सोमबार मात्रै पुष्टि भएको हो ।
प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (इन्टरपोल) ले पहिचानका लागि दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरूको तस्बिर नेपाल प्रहरीको इन्टरपोल शाखामा पठाएको थियो । इन्टरपोल नेपालमार्फत प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा पुगेका तस्बिर परिवारजनले सोमबार सनाखत गरेका थिए । ब्युरोका अनुसार दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–६ का ३० वर्षीय राजु लामा, रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका–४ की २१ वर्षीया शर्मिला भनिने रमिला घले, कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–४ का ३८ वर्षीय लक्ष्मण सापकोटा र तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका–५ का ओमबहादुर थापाको उक्त दुर्घटनामा मृत्यु भएको हो ।
ग्रिस इन्टरपोलले पठाएको पत्रअनुसार सवारी लाइसेन्स नभएका मोल्दोभाली चालकले चलाएको कालो कारमा १५ जना सवार थिए । ग्रिस प्रहरीले रोक्न खोजेपछि तीव्र गतिमा हुइँकिएको कार पर्खालमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको थियो । उक्त कारको डिक्कीमा मात्रै चार जना रहेको जनाइएको छ । दुर्घटनामा घाइते भएका दोलखा, भीमेश्वर नगरपालिका–९ का मनु लामा र कैलालीको गौरीशंकर नगरपालिका–४ का लोकराज आचार्य केही दिनको उपचारपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका थिए । लोकराज र लक्ष्मण असोज २ मा नेपालबाट सँगै टर्की उडेका थिए । मनु र राजु भने असोज ९ मा उडेका थिए ।
रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका–४ की २१ वर्षीया शर्मिला भनिने रमिला घले
मृतक राजुका बाबु बलरामले कात्तिक २० गते भाइटीकाको दिन छोरासँग फोनमा कुराकानी भएको सुनाए । ‘उसले टर्कीबाट फोन गरेको थियो । मोबाइल, पासपोर्ट, लत्ताकपडा सबै यतै छाडेर ग्रिस छिर्न लागेको, अब केही दिन सम्पर्क हुँदैन भन्थ्यो । ग्रिस पुगेर फोन गर्छु भन्थ्यो,’ उनले भने, ‘धेरै दिनसम्मै छोरा सम्पर्कमा नआएपछि मनमा चिसो पस्यो ।’ उनले पटक–पटक गरेर दस लाख रुपैयाँ बुझेका एजेन्टहरू शम्भु लामा र ईश्वर लामालाई सम्पर्क गरे । तर उनीहरूले झूटा सूचना दिए । त्यसपछि उनले टर्कीबाट ग्रिस छिर्न लागेको गाडी दुर्घटनामा परेको र त्यसमा केही नेपाली परेको खबर सुने ।
छोराको खबर बुझ्न भन्दै मंसिर २५ मा काठमाडौं छिरेका बलरामले डेढ साता परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि कन्सुलर विभाग, वैदेशिक रोजगार विभागदेखि प्रहरीका चोटाकोठामा चक्कर काटे । सोमबार प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा पुगेका उनलाई प्रहरीले कम्प्युटरको स्क्रिनमा ग्रिस प्रहरीबाट प्राप्त तस्बिर देखाएको थियो । उनले छोराको फोटो चिनिहाले ।
संयुक्त अरब इमिरेट्समा तीन वर्ष काम गरेर २०७२ को भूकम्पलगत्तै नेपाल फर्केका राजु कामविहीन थिए । गत भदौमा उनले बुबालाई भने, ‘म टर्की जाने भएँ । एजेन्टले सबै कुरा मिलाइसकेको छ । भनेको समयमा नउडे जरिवाना तिर्नुपर्छ ।’ बलरामले छोरालाई भनेका थिए, ‘कहाँ कस्तो काममा लैजाने हो ? कागजपत्र ठीक छ कि छैन ? राम्ररी कुरा नबुझीकन पैसा नर्तिनू ।’ तरकारी खेती गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका बलरामले ४ वर्षकी नातिनीको अनुहार र ८ महिनाकी गर्भ बोकेकी बुहारीलाई सम्झिरहेका छन् । कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘परराष्ट्रमा शव ल्याइदिनलाई निवेदन दिएका छौं । अब के गर्छन् कुन्नि ?’
लामो समय साउदी अरबमा काम गरेका लक्ष्मण सापकोटा केही वर्षअघि नेपाल फर्केका थिए । केही समय घर बसेर उनी फेरि काम गर्न झन्डै डेढ वर्ष बेंगलुरु बसे । त्यहाँबाट फर्केपछि उनी फेरि वैदेशिक रोजगारीमा जाने ताकमा थिए । गाउँकै डिल्लीराज सापकोटा र जीवलाल कँडेल केही समयअघि टर्की हुँदै ग्रिस छिरेका थिए । उनीहरूले नै भनेपछि लक्ष्मण पनि कस्सिए । परिवारका सदस्यका अनुसार उनी एजेन्ट सुरज लिम्बूमार्फत ५ लाख रुपैयाँ खर्चेर व्यक्तिगत रूपमा एक वर्षको कामदार भिसामा टर्की पुगेका थिए । स्थानीयका अनुसार सुरजमार्फत सोही गाउँका अन्य दुई जना पनि टर्की पुगेका छन् । त्यहाँबाट उनी संगठित मानव तस्करको भर परेर अवैध रूपमा ग्रिस छिर्न खोजेका थिए । भतिज गणेश सापकोटाले भने, ‘वैदेशिक रोजगार बोर्डमा शव ल्याइदिनका लागि पहल गरिदिन भनेर निवेदन दिएका छौं ।’
रसुवा आमाछोदिङमोका फुर्वा लामाले तीन वर्षअघि रोजगारीको खोजीमा दलालको पछि लागेर भारतको बाटो हुँदै इराक पुगेकी साली शर्मिला भनिने रमिला घलेको खोजीमा काठमाडौं आएको सुनाए । उनकी सालीले कात्तिकको मध्यतिर फोन गरेर भनेकी थिइन्, ‘म इराकबाट टर्की आइसकें । अब यहाँबाट ग्रिस छिर्छु ।’ फुर्वाका अनुसार शर्मिलाले दलाललाई बुझाउन भन्दै चार लाख रुपैयाँ खोजिरहेकी थिइन् । उनले भने, ‘धेरै दिनसम्म सम्पर्कमा नआएपछि खबर बुझ्न काठमाडौं आएको थिएँ । अहिले त यस्तो खबर पो सुन्नुपर्‍यो ।’
तनहुँका ओमबहादुर थापा दुई वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा दुबई पुगेका थिए । त्यहाँबाट उनी इराक छिरेका थिए । ‘भाइटीकाको अघिल्लो दिन बुबाले टर्कीबाट खबर गर्नुभएको थियो,’ ओमका छोरा मिलनले भने । दुर्घटनामा बाँचेका कैलालीका लोकराज आचार्यले परिवारका सदस्यहरूलाई आफूहरू १३ दिनसम्म जंगलको बाटो हिँडेर ग्रिस छिर्ने सिमानामा पुगेको बताएका थिए ।
संगठित मानव तस्करका गिरोहको भर परेर नेपालबाट टर्की हुँदै ग्रिस पुग्दासम्म नेपालीले ११ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेको पाइएको छ । २०७५ साउनमा अवैध रूपमा टर्कीबाट ग्रिस छिर्न खोजेका नवलपरासी कावासोतीका नवीन तिवारी बीचैमा हराएको खबर सार्वजनिक भएको थियो । नवीनसँगै ग्रिस छिर्न खोजेका इलामका एक युवाले त्यतिबेला कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘चिसो हिउँ
पछ्याउँदै भोकै प्यासै कैयन् दिन घना जंगलको बाटो हुँदै ग्रिस छिरे पनि सजिलै काम भेटिँदैन रहेछ र कमाइ पनि राम्रो नहुँदो रहेछ ।’
हिन्द महासागरको मृत्यु घटनामा एक पक्राउ
वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा परी दुबई हुँदै सोमालिया पुगेका एक नेपालीको मृत्यु भएको घटनामा भक्तपुर थिमि नगरपालिका–३ का कविराज कटुवाललाई प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको छ ।
ब्युरोका अनुसार गत वैशाख १२ मा ती युवालाई कविराजले मासिक ९ सय अमेरिकी डलर तलब हुने सुरक्षा गार्डको कामका लागि दक्षिण अफ्रिकाको टापु देश सिसेल्स लैजाने भनेर दुबई पुर्‍याएका थिए । दुबईबाट उनलाई समुद्रमा जोखिमपूर्ण सुरक्षा गार्डको काममा लगाई सोमालिया पुर्‍याइएको थियो । समुद्रमा काम गर्दागर्दै उनको खुट्टा सुन्निने र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या भएको थियो । बिरामी हुँदा पनि उपचार नपाएका उनको पानीजहाजमै भएका बेला गत असोज २ मा मृत्यु भएको थियो । मृतकको परिवारले शव नेपाल झिकाइदिन कविराजसँग हारगुहार गरेका थिए । प्रहरीका अनुसार कविराजले त्यसका लागि ४० लाख रुपैयाँ लाग्ने भन्दै उल्टो पैसा मागेका थिए । प्रहरीले कविराजविरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ अनुसार अनुसन्धान गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
प्रकाशित : पुस ८, २०७८ ०७:१०